March 2014 | အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ)
ချစ်သူကို အချိန်ချိန်မှန်မှန် Message ပို့ချင်တဲ့ သူများရှီလား Bear SMS Scheduler Pro v1.5.0
Birthday wish လုပ်ဖို့မေ့နေလား ? သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကို တပြိုင်နဲ့ မုန့်သွားစားဖို့ခေါ်ချင်တာလား ?
ချစ်သူကို အချိန်ချိန်မှန်မှန် Message ပို့ချင်တဲ့ သူများရှီလား မသိဘူး … Application လေးပေးမလို့ပါ … ကိုက ဘယ်အချိန်ပို့မယ်လို့ သတ်မှတ်ထားယုံပါပဲ … အဲ့အချိန်ကြရင် Auto ပို့သွားပါလိမ့်မယ် ….
Sharing – Thaw Ta
Huawei C8815 imei ပျောက် Sim Card မသိ 1x error 3G မတက် build number ပြန်ဆင်းစရာမလို ဘာလာလာဒေါင်းဒယ်ဗျာ
ဘာမှ ဖုန်းserviceတက်စရာမလိုဘူး လက်ညှိုးကလေးနဲ. နံပါတ်တစ်နှိပ်တက်ရင်ရပြီ
Download Link 1 (or) Download Link2(or) Download Link3(or) Download Link 4
Download လုပ်နည်းမသိ၇င် >>> ဒီမှာ <<< သွားဖတ်လိုက်ပါ
Download Link များ ပျက်နေ ၇င် ဆွဲလို မ၇ ၇င် commend ပေးပြီး ပြောပေးကြပါအုန်နော် ကျွန်တော်သိတာနဲ တောက်လျှောက်ပြန်တင်းပေးပါမယ်
အဆင်ပြေ၇င်တော. မန်ဘာဝင်ထားကြဖို့လဲ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
Credit to - Phyo Chan < Admin at MMSD >
Huawei C8815 Sim Card လိုင်းမတက်ရင် ပြင်ဆင်ဖို့ apk ပါခင်ဗျ ၊
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: ROOT Softwares
-မိမိဖုန်းထဲမှာတင် apk ကိုအသုံးပြုပြီး root ဖောက်လို့ ရစေနိုင်မယ့် application ပေါင်း
ခုနှစ်မျိုးကို စုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်-
-ဖုန်း Handset ပေါင်းများစွာရှိတာကြောင့် Device အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေ/မပြေ ဆိုတာကို
မပြောနိုင်ပါ။Android Version 4.3 နဲ့ 4.4
တွေမှာတော့ မ root ပေးနိုင်ပါဘူး-
-ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် apk တစ်ခုမရ တစ်ခုနဲ့ စမ်းသပ်ပြီး
root ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က
လင့်ခ် တွေမှာ ဒေါင်းလုပ်ယူသွားလိုက်ပါ-
★root apk အားလုံးကို rar file တစ်ခုထဲ
♨ rar file♨
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း မိမိနေအိမ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သိထားသင့်သော ပြုသင့်၊ မပြုသင့်၊ ရှိသင့်၊ မရှိသင့် စသည်တို့ကို မှတ်စု အနေဖြင့် ပြုစုထားသော ``မနောမယ´´ App ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...အားလုံး သိထားသင့်၊ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ app တခုပါဗျာ...လင့် ၂ခု မှ အဆင်ပြေသော လင့်က ဒေါင်းယူကြပါခင်ဗျာ...Admin✌TW
မြန်မာများအတွက်ဖေ့စ်ဘုတ် အခမဲ့ဖွင့်ပေးမည် မှကူးယူတင်ပြသည်
မိမိတို့ဖုန်းကို နေရောင်ခြည်နဲ့အားသွင်းမယ်Solar Charger Faster
Android ဖုန်းကိုင်ဆောင်ကျတဲ့သူငယ်ချင်ဒများအတွက် နေရောင်ခြည်နဲ့ ဖုန်း Battery သွင်းလို့
ရမဲ့ Solar Charger Faster Apk လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Play Store မှာတော့ လူကြိုက်များပြီး နာမည်ရတဲ့ Apk လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းသွားလမ်းလာ Battery ကုန်မှာမကြောက်ရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။
Android Version 2.2 အထက်မှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Samsung Galaxy Ace2GT-I8160 Jelley Bean version 4.1.2 ကို Root အလွယ်တကူလုပ်ကြရအောင်။
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Firmwares ပိုင်းဆိုင်ရာ, ROOT Softwares
Samsung Galaxy ACE -2GT-I8160 ရဲ့ Jelley Bean version 4.1.2 ကို Root လုပ်ရန်
အခက်အခဲဖြစ်နေသူများအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
>>>>>>> ဒါလေးကို ဒေါင်းပါ။ <<<<<<<
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ zip file လေးကို sd card ထဲထည့်လိုက်ပါ။
Phone ကို Recovery mode ၀င်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် sd card ထဲထည့်ထားတဲ့ zip file လေးကို ရှာပြီး Flash ပေးလိုက်ပါ။
Flash ပြီးရင် Phone ကို Reboot ချပေးလိုက်ပါ။
ပြန်တက်လာရင်တော့ သင့်ဖုန်းမှာ Root Access အပြည့်အ၀ အလုပ်လုပ်တဲ့ SuperSU လေး
ကျတော်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုပာာ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်
..........::::: အဆင်ပြေပါစေ :::::.........
Holiday ဆိုတော့ သီချင်းတွေ download ရတာ mpt connection နဲ့ browser ဝင်ရတာခက်တယ်ဗျနော် ...Mp3 downloader ကောင်းကောင်း လိုချင်နေတယ်လို့ ပြောနေတဲ့သူတွေအတွက်လူပေါင်း 10,000,000 ကျော်Download ပြီး 5star ၄သိန်းလောက်ရထားတဲ့ apk လေးက ကူညီပါလိမ့်မယ် .Size က သေးသေးမှ သေးသေးလေးပါ...ပျော်ရွှင်ပါစေနော် ....
Facebook Official version v7.0.0.26.28.apk For Android
Facebook ကို Android Phone တွေမှာ သုံးတဲ့အခါ Photo comment လေးတွေသုံးရတာ
ဒီ version မှာ အဆင်ပြေသွားပြီလို့သိရပါတယ်။
ဒီapk လေးနဲ့ GPSကိုဖွင့်ပြီး နက္ခတ် leo ကို ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားတယ် ဘာတွေနဲ့ ဘွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာရှာကြည့်မယ်
ဒီ apk နဲ့. ပါတ်သက်ပြီ ကျွန်တော် စကားများများ ပြောပြီးမိတ်ဆက်ရပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ ။
ကျွန်တော် ရှာတွေ့သမျှapk တွေထဲမှာ ဒီလို apk မျိုး တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး ။အခုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရှာဖွေမှု့ကြောင့် သူငယ်ချင်းများကို ဂုဏ်ယူစွာshare နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့်ဖုန်းက GPS ကို ဖွင်ပြီး ပုံ(၁)အတိုင်း တည်နေရာ ပြုလိုက်တော့ ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ လက်တီကျူ့ လောင်ဂျီကျူ့တွေကို ပုံ၂ မှာ ပြပေးပြီး
ယခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ နေရာမှ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ နက္ခ ကို ဖော်ပြပါတယ်။
အခုကျွန်ါ်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာပေါ် ထွန်းနေတဲ့ နက္ခကတော့ Water Snake ဆိုတဲ့ နက္ခမှာ ရှိနေတာပါ ပုံ(၃) ကဲ ဒါဆို ဆက်ရအောင် ဒီWater Snake က ဘာကြယ်တာယာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲ ကျွန်တော် ကြယ်တစ်လုံးကို သွားကြည့်လိုက်တယ်။ ပုံ ၄
Head of Hydrus ဆိုတဲ့ ကြယ်ဖြစ်ပြီး သူနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ သိပ္ပံဆိုင်ရာ နံပါတ်ဘာညာဖော်ပြထားပါတယ်။
ကဲခပ်သုတ်သုတ် ပဲသွားရအောင် menu ကိုဝင်ရင် ပုံ ၅ အတိုင်း ခေါင်စဉ်မျိုးကွဲအများကြီးတွေ့ရမှာပါ ကျွန်တော်တချိုကိုပဲမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
ကဲဒါဆို ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ နေစကြာဝဠာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့
Solar System ကိုသွားရအောင်
ကဲဝင်လောက်ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ solar system ထဲက ဂြိုလ်ကြီးများနှင်တကွ နေမင်းကြီးကိုပါတွေ့ရမှာပါ ။ပုံ ၆
ကဲ ဒါဆို တခြားဂြိုလ်တွေခဏထား နေမင်းကြီးကိုအရင်လေ့လာရအောင် SUN
ပုံ ၇ မှာနေမင်းကြီးပေါ်လာပါပြီ ဒါက screen shot ဆိုတော့ ငြိမ်ငြိမ်ကြီးပဲပေါ်ပါတယ် ဖုန်းနဲ့ ဆို လှုပ်ရှားနေတဲ့ HD 3D ပုံရိပ်တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။
ကဲနေမင်းကြီနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဦး ကမ္ဘာကနေ149.2. Million Km ဝေးသတဲ့
မျက်နှာပြင်ဆွဲငင်အားက 27.94G ဆိုတော့ ကမ္ဘာထက် သုံးဆ နီးနီးဆွဲအားရှိတာပေါ့။
အဝေးကကြည့်တာအားမရရင်အနီးကပ်ဆွဲကြည့်ပါ အသေအခြာ မြင်နေရပါတယ် နေရောင်ချည်ကွင်းတွေဖြာထွက်နေပုံ မျက်နှာပြင်မှာလောင်ကျွမ်းနေပုံ တကယ်မိုက်ပါတယ်။ ပုံ ၈ ပါ ကဲထားတော့။
ဒီတခါ စောစောက ခေါင်းစဉ်တွေထဲက
Constellation ဆိုတဲ့ နက္ခတ်တာယာအပိုင်းကိုလေ့လာရအောင်
ကျွန်တော်က Leo သမားဆိုတော့ ကျွန်တော့် နက္ခ leo ကိုသွားလိုက်ပါမယ်။ ပုံ ၉
ကဲ ပုံ ၁၀ မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော့်ရဲ့ နက္ခတ် leo ကို ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားတယ် ဘာတွေနဲ့ ဘွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါပြီ။
ကဲဒါတွေကတော့ ဒီ apk ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲက အနဘ်းအကျဉ်းသားထုတ်နှုတ်တင်ပြတာပါ။
Galaxy တွေ ကြယ်တွေ နောင်အသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့ ဂြိုလ်တွေ ။အစုံပါပဲ။
ကဲဒီတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီ apk လေးကို အားလုံးအတွက် share လိုက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။
သက်ပိုင်ထွန်း (IT လောကထဲက မူကြိုကျောင်းသား)
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: ကွန်ပြူတာ Software, ဖုန်းနည်းပညာများ
ပြီးရင် connect နိုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင်ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့် လိုက်ပါ ကြိုးထိုးလိုက်ပါ ဖုန်းရဲ့မော်ဒန် အမျိုးအစား ရွေးချယ်ပါ Rescan နိုပ်ပါ ပြီးရင် Baseband repair Tool ထဲဝင်ပါ repair method3မျိုး ရှိပါတယ် အဲ့သုံးမျိုးနဲ့ ပြင်ကြည့်ပါ တော်ရုံဆိုပြင်လို့ ရပါတယ် အောက်မှာ EFS Store လို့ ရတယ် Restore လဲ လုပ်လို့ ရပါတယ် ကျန်တာတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ပဲ ကလိကြည့်ပေါ့ …ကျွန်တော် စမ်းသပ်လို့ အောင်မြင်တဲ့ ဆော့ဝဲတစ်ခုပါ
credit to:ဟယ်လိုသားကြီး(MMSD)(Myanmar Mobile Software Developer)
Galaxy Note3SM-N9005 KitKat version 4.4.2 ကို myanmar စာ ပါပြီးသား Firmware
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Firmwares ပိုင်းဆိုင်ရာ
Samaung Galaxy Note3KitKat version 4.4.2 ကို myanmar စာ Build in
ပါတဲ့ Firmware လေးပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Singapore Firmware ပါ ... error လဲ ကင်းပါတယ်။
Credit : https://www.facebook.com/pages/MobileMother/427174133996920
Samsung Galaxy Note3SM-N900 KitKat version 4.4.2 ကို myanmar စာ Build-in ပါပြီးသား Firmware
Samsung Galaxy Note3SM-N900 KitKat version 4.4.2 ကို myanmar စာ
Build-in ပါပြီးသား Firmware တင်ချင်သူတွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာစာ Build-in လေးနဲ့ဆိုတော့ Root အတွက်လဲပူစရာ သိပ်မလိုတော့ဘူးပေါ့။
Root လုပ်ချင်ရင်လဲ အဆင်ပြေအောင် ကျတော်တင်ပေးထားပါတယ်။
Firmware လေးကို စိတ်ဝင်စားရင်တော့.......
Credit : Mobile Mother
အခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ဖုန်းမှာ ဒီ apk install လုပ်ထားပါ။
သူ့ဖုန်းကို Where are you? လို့ message ပို့လိုက်ပါ။
သူရှိနေတဲ့နေရာကို ကိုယ့်ဆီ သူတောင်ဘာမှမသိလိုက်ဘဲ message ပြန်ရောက်လာမယ်။
Message မှာသူရှိနေတဲ့ Latitude နဲ့ Longitude ပါလာမယ်။
အဲဒီလင့်ကိုကလစ်လိုက်တာနဲ့ (ကိုယ့်ဖုန်းမှာအင်တာနတ်တော့ဖွင့်ထားပါ) သူရှိရာနေရာကိုမြေပုံနဲ့မြင်ရမယ်။
Huawei Handset တွေမှာသိပ်အဆင်မပြေသေးပါ။
Message ပို့တဲ့ဖုန်းက ဘယ်ဖုန်းမဆိုရပါတယ်။
Message ပို့လို့ရတဲ့ဘယ်ဖုန်းမဆို (အိုင်ဖုန်းပင်ဖြစ်စေ) ရပါတယ်။
Android စာအုပ်မှာပါတဲ့ project လေးပါဘဲ။
Htar Htar Saw Lwin
Total SmS Control v2.1.1 for Android Apk နှင့် အသုံးပြုပုံ
Internet Watch Pro Version Update: 1.02 (For Android)
Daily Reportမှာ date စဉ်တဲ့အခါ မှားနေတာလေးတွေကို ပြင်ထားပါတယ်။
Created &Posted by ပိုးပိုးမြင့်ဆွေ
ခလုတ်တစ်ချက်ထဲ့နဲ့ Android ဖုန်းများကို Recovery Mode ဝင်ပေးမဲ့ Reboot recovery Apk
Android ဖုန်းကိုင်ကျတဲ့သူငယ်ချင်းများ အတွက် အလွန်ပဲဆောင်ထားသင့်တဲ့
Reboot recovery Apk ဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကဆိုကျနော်တို့က ဖုန်းတစ်လုံးကို
Recovery Mode ဝင်ဖို့ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ ပါဝါခလုတ်တွေနဲ့ အသံခလုတ်တွေ ရူပ်ရှက်ခက်
အခုတော့ ကျနော်တို့က ဖုန်းတစ်လုံး Recovery Mode ဝင်ဖို့ ဘာခလုတ်မှ နှိပ်စရာမလိုပဲ
လိုအပ်တဲအချိန် ဒီ Apk လေးကို နှိပ်ပြီး Recovery Mode ဝင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Service လုပ်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ လုံးဝ တန်ဖိုးရှိတယ်လို့တော့ ကျနော်ထင်တယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကလဲ 1.MB လောက်ပဲရှိပါတယ်။
Sim error ကိုရှင်းရတာ ခေါင်းကိုက်နေတဲ့ကိုကိုမမတွေအတွက်နော်
Vroot လေးနဲ့တော့အရင် root လိုက်အုံးဗျ
ပြီးရင် Sim ထည့်ပီး....................................................
Posted By Hein Kyaw Swar
FaceBook အကောင့် ကို Browser မသုံးပဲ ID နဲ. ဖောက်မယ်
FaceBook အကောင်. ကို Browser မသုံးပဲ ID နဲ. ဖောက်မယ်.....
(မသိသေးတဲ.သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ) ကျွန်တော်လုပ်တာတော. 100% ရပါတယ်
Gmail အကောင်.မရှိလည်းဖောက်လို.ရပါတယ် လိုအပ်တာကတော.........
Phone setting >>Manange Application>>Facebook ကို ( clear data ) လုပ်ရပါမယ်
Send code တောင်းတဲ.အခါမှာ မိမိ Mail ထဲမှ Code နံပက်ကို ရိုက်ထည်.ပေးရပါမယ်
Mail ထဲမှာ တိုက်ရိုက် ပြုလုပ်လို.မရပါ အောက်မှာ ပုံနဲ.တကွ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်